JINGHPAW KASA: ကျွန်နော် အစွန်းရောက်နေပါသလား
မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုသလိုပဲ ဆိတ်ဆိတ်နေရမယ့် အချိန်ရှိသလို ထုတ်ပြောရမယ့် အချိန်လည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ရှင်းဖို့လိုတာကိုရှင်းသင့်ပြီထင်လို့ ဒီစာစုလေး ရေးဖြစ်သွားကြောင်းပါ။ ဒီစာစုလေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ “ကျနော် အစွန်းရောက်နေပါသလား” ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် အစွန်းရောက်နေပါတယ် လို့ ဖြေပါ့မယ်။ ဘယ်အရာမှာ အစွန်းရောက်နေသလဲဆိုတော့ စိတ်ဆင်းရဲ နာကျင်မှုမှာ အစွန်းရောက်နေတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော့်လူမျိုး တိုင်းတပါးသားတွေကျူးကျော်စော်ကား တိုက်ခိုက်တာခံနေရလို့ စိတ်နာကျင်ခံစားနေရပါတယ်… တိုင်းတပါးသားလို့ သုံးနှုံးလိုက်လို့ အပြစ်မြင် မစောလိုက်ပါနဲ့ဦး။ ကျနော် ရှင်းပါ့မယ်. ဒါကို ရှင်းဖို့ အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောက်ထပ် မေးခွန်းတစ်ခု ထပ်မေးပါ့မယ်။ ကျနော် ဗမာ မုန်းပါသလား။ မမုန်းပါဘူး.။ ဗမာ မှ မဟုတ် ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာဝင်ကိုမှ မမုန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗမာမဟုတ်တဲ့လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ Anti-Burmese Sentiment လေးတော့ ရှိတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်… ဒါကလည်း ဘ၀အတွေ့အကြုံ၊ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ခေတ်စနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သွားကြတဲ့ (အုပ်ချုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့) ဗမာကြီးစိုးတဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ မှားယွင်းပြီး တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ အမျိုးသားရေး မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယိုးစွပ်ပါရစေ။ ကိုယ်နဲ့ မျိုးနွယ်မတူ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာမတူ၊ စာပေဘာသာစကား မတူတဲ့ အတွက် တိုင်းတပါးသားလို့ သုံးနှုံးလိုက်ကြောင်းပါ။
ဒီတော့ မေးစရာ ရှိလာပါလိမ့်မယ် အစိုးရက ကချင်တွေကို စစ်ဆင်ရေးလုပ်တာပဲ၊ ဗမာလူမျိုးတွေ ကချင်တွေကို သွားတိုက်နေတာမှ မဟုတ်တာလို့ ဖြေကောင်း ဖြေပါလိမ့်မယ်.. ကချင်လူမျိုးတွေကို တိုက်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ ကချင်သူပုန် ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေကို တိုက်နေတာပါလို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အဆင့်ဆင့်မှာ တာဝန်ရယူထားကြတဲ့ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သားအားလုံးနီးပါးဟာ ဗမာလူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပြုစေလိုပါတယ်။
ကိုယ့်ပြည်အတွက်၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်သာ မဟုတ်ပဲ စစ်မက်ကင်းစင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်ဖို့၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး ညီတူမျှတူ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ အမျိုးသားညီလာခံမှာ တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂရုစိုက်မခံရ၊ အရေးတယူလုပ်မခံရပဲ စစ်အစိုးရက သူတို့ရေးထားပြီးသား ဖွဲ့စည်းခံအခြေခံဥပဒေကို အတင်းအဓ္ဓမရေးဆွဲအတည်ပြုခဲ့ကြတာ အားလုံးအသိ။ ကေအိုင်အိုလဲ ညောင်နှစ်ပင်ကနေလက်ဗလာပြန်လာရတဲ့ အနေအထားပါ.. အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့လဲ လုပ်ချင်သလို လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ကျနော်တို့လဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲနေတော့မယ်ပေါ့ဗျာ။ ရှင်းနေတာပဲ မဟုတ်လား။ နောက်တော့ ဖြစ်လာတာက ကွန်စတီကျူးရှင်းကို လက်မခံရင် သောင်းကျန်းသူတဲ့။ သူပုန်တဲ့။ ကဲ ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ အခြေခံဥပဒေလက်မခံတဲ့ကိစ္စ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်လက်မခံတဲ့ကိစ္စ၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ကန့်ကွက်တဲ့ကိစ္စ (မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆက်လုပ်ရင် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကေအိုင်အိုက တရုတ်အစိုးရ ကို စာရေးသားပေး ပို့ခဲ့ပါတယ်) တွေကြောင့်ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာ အားလုံးအသိပါ။ နောက်ဆုံးတော့လဲ တရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ အသားလွတ် အပြစ်ရှာကြံပြီး စတိုက်တော့တာပဲ။ ဒါတောင် အကောင်းမြင်ပြီးပြောပေးတာနော်။ တရုတ်နဲ့ ကချင် ဘယ်သူက ကိုယ့်နိုင်ငံသားလဲ။ လူမျိုးခြားအကျိုးစီးပွားအတွက် အပစ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို မရှက်မကြောက် ချိုးဖောက်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ကျူးကျော်စော်ကားတော့တာပဲ။ ဒီတော့ ကချင်တွေ ဘာတွေမှားနေလို့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရတာလဲ.. ကချင်လာဖြစ်တာ အပြစ်လား။
နေစမ်းပါဦး သောက်ကြီးသောက်ကျယ်တွေ ပြောနေရအောင် မင်းက နိုင်ငံရေးပညာရှင်လား၊ ဘာတွေ တတ်သိကျွမ်းကျင်နေလို့လဲ၊ ကေအိုင်အိုလုပ်တာ အကုန်မှန်နေရောလား၊ အစိုးရပဲ မှားနေလို့လားလို့ တော့ မမေးပါနဲ့ဗျာ။ ကျနော် ပြောပါ့မယ်၊ ကျနော် ဘာနိုင်ငံရေးမှ နားမလည်ပါဘူး။ မြင်တာကို မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောတာပါ။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ပြောတာပါ။ အမှန်တရားကို လူတိုင်းနှစ်သက်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းအရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောတာပါ။ ဒီနေ့အထိတော့ ကေအိုင်အိုက မှန်ကန်တဲ့ မူဝါဒနဲ့ ပင်လုံကို အခြေခံတဲ့ စစ်မှန်ပြီး တရားမျှတတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ ပြောနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကေအိုင်အိုဦးဆောင်တဲ့ ကချင်နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ဟာ မှန်ကန်မျှတတယ်လို့ လက်ခံပါတယ်။ ဒီတော့ အစိုးရကပဲ မှားနေတယ်ပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့။ မှားနေတယ်လို့ ယေဘုယျ ယူဆရမှာပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက် ဘယ်အစိုးရကမှ ဒီကနေ့ကာလမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမျိုးကို မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ကျနော်လက်ခံပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ဘက် အစစအရာရာ သေချာသွားပြီးတဲ့နောက်၊ ခိုင်ခိုင်မာမာ အမြစ်တွယ်ပြီးတဲ့ နောက်ကျမှ အပြောင်းအလဲဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အတိုက်အခံတွေ ဘာမှလုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အခြေအနေကျမှာ အန်တီစုနဲ့ နိုင်/ ကျဉ်းတွေကို လွှတ်ပေးတာ အားလုံးအသိပါ ၏။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်။ သဘောတူညီမှုတွေ ရယူနေတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်အဖွဲ့ကမှ အစိုးရကို ယုံလို့ လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး.. အစိုးရမှာ မှန်ကန်တဲ့သဘောထား (Sincerity) ရှိရဲ့လားဆိုတာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာပါ ၏.. ကေအင်ယူက အပစ်ရပ်စာချုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားတဲ့ အစိုးရက အပစ်ရပ်စာချုပ်လို့ ကြေငြာတဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းပြောတဲ့စကားကို ကြည့်ပါလား။ တိုင်းရင်းသားတွေ လက်နက်ကိုင်တာ ဆင်းရဲလို့ တဲ့.. ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးရင် အားလုံး အလိုအလျောက် လက်နက်စွန့်သွားကြမှာပါတဲ့.. ကဲ စော်ကားလိုက်လေခြင်း။ ချမ်းသာချင်ရင် စီးပွားရေးလုပ်မှာပေါ့.. ပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ပါ့မလား။
နိုင်ငံရေးပြဿနာကို သိသိကြီးနဲ့ လျစ်လျူရှုချင်တဲ့ အစိုးရ၊ အမြီးကျက် အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား လုပ်နေတဲ့ အစိုးရ၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး မူဝါဒမရှိတဲ့ အစိုးရ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်းစေချင်လို့သာ ဖုတ်ပူမီးတိုက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးတွေလိုက်လုပ်နေတဲ့ ဒီအစိုးရနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်တွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမယ် ထင်သလဲ.. အခန်မသင့်ရင် ကချင်ကို စော်ကားသလိုစော်ကားကြဦးမှာပဲ။
ဒီတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာအရင်းအမြစ်ကို ဖြေရှင်းလိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့ ကေအိုင်အိုရဲ့ ပေါ်လစီထက်ကောင်းတဲ့ဟာ ရှိပါဦးမလားဗျာ။ ကချင်မို့လို့ ကေအိုင်အိုကောင်းကြောင်း စွပ်ပြောနေတယ်လို့တော့ အလျင်စလို မမြင်စေချင်ဘူး။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ.. ဒီပြဿနာမရှင်းနိုင်ရင် နိုင်ငံလဲ သိက္ခာကျတယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလဲ နောက်ကျကျန်ခဲ့မယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာ နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်လာပြီဗျာ။ ဗမာအစိုးရအနေနဲ့ နောင်တရသင့်ပါပြီ။ မင်းတို့ ကချင်တွေပဲ ခေါင်းမာနေ၊ ဒေါ်စုနဲ့ အင်အယ်လ်ဒီတောင် ဂငယ်ကွေ့ကွေ့သွားပြီလို့ ပြောစရာရှိပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်။ အန်တီစု အနေနဲ့ သူ့အသက်အရွယ်၊ သူ့အနေအထားအရ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လက်တွေ့အကျဆုံးပါပဲ။ ထောက်ခံပါတယ်။ အင်အယ်လ်ဒီအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။ ဒါ အကောင်းဆုံးပါပဲ.. ဒါပေမယ့် အင်အယ်လ်ဒီ လွှတ်တော်ထဲရောက်ပြီးရင် ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမရှိပဲ အင်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဒီကနေ့ ကချင်တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ အင်အယ်လ်ဒီအတွက် အထောက်အပံ့တစ်ခုပဲလို့ မြင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချင်တယ်လို့ ထင်ချင်လဲ ထင်နိုင်ပါတယ်။ ပြောရင်းပြောရင်းလဲ ဆိုလိုရင်းနဲ့ လွှဲလာသလိုပဲ။ ဒီတော့ ဒီစာစုလေးကို ရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ပြန်ကောက်ရအောင်။ ကျနော်ဟာ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေး ၀ါဒီမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။ အရှိကို အရှိအတိုင်း အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်နေတာပါ။ ကချင်လူမျိုးမိဘနှစ်ပါးမှာမွေးဖွားတဲ့ကချင်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ပြည်မဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာတာပါ.. ကချင်သူငယ်ချင်းထက် ဗမာနဲ့အခြားလူမျိူးသူငယ်ချင်းတွေ ပိုများပါတယ်.. ဒီကနေ့အထိ ဘယ်ဗမာကိုမှ မကျူးလွန်၊ မစော်ကားဖူးပါဘူး။ သေချာရဲ့လားလို့ မေးမယ့်သူတွေကိုတော့ မှားခဲ့ဖူးတာရှိရင် လွန်တာရှိရင် ၀န္ဒာမိပါ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အပြင်မှာ လူချင်းတွေ့လို့ ဒီအကြောင်းအရာကို ရင်ဖွင့်ချင်လို့ပါဆိုရင်တောင် ဘယ်ဗမာသူငယ်ချင်းကမှ နားထောင်ပေးနိုင်မှာမှ မဟုတ်ပဲလေ။ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကို အခြေမခံကြောင်း အစိုးရရဲ့ သောက်သုံးမကျတဲ့လမ်းစဉ်ကို မီမောင်းထိုးဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် မကျေနပ်တာ၊ အားမရတာလေးတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ပါရစေ။ ဒီနေ့ထိ ကချင်တွေစော်ကား တိုက်ခိုက်ခံနေရတာ(၈)လကျော်လာပါပြီ။ ဘာလို့များ ဗမာတွေထုတ်ဝေတဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေနှုတ်ဆိတ်နေ ရတာပါလဲ။ သွေးချင်းလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြတဲ့ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ဘယ်ဗမာမှ အရေးတယူမလုပ် လျစ်လျူရှုနေကြတာလဲ။ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးပေါ့။ မင်းတို့ အတိတ်ဘ၀က မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ အခုပြန်ခံနေရတာပေါ့လို့များ မှတ်ယူထားကြလို့လား။
ကျနော်ကတော့ မတရားမှုတစ်ခုမှာ ဘယ်သူမှ ကြားမနေသင့်ဘူးဆိုတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူးရဲ့ အဆိုကို ပြေးသတိရမိတယ်ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီကချင်တွေ မျိုးသုဉ်းသွားပါစေလို့များ မေတ္တာထားကြလို့ ဆိတ်ဆိတ်နေလေရော့ သလား။ မြစ်ဆုံအရေးတုန်းက အားလုံးညီညွတ်လို့ ဦသိန်းစိန်အစိုးရ လက်မြှောက်ခဲ့ရတာပဲဗျာ။ တနိုင်ငံလုံး ဒုက္ခများမယ့်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိစ္စမှာပင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့၊ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးကောင်းစားရေးကိုပဲပြောနေတဲ့ ကေအိုင်အိုနဲ့ ကချင်တွေကို အစိုးရကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်နေတာကို လက်ပိုက်စောင့် ကြည့်နေနိုင်ကြလားဗျာ။ နောင်တော် ဗမာတွေညီညွတ်ရင် ကျနော်တို့ ကချင်တွေ ဗမာအစိုးရလို့ ခေါ်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကြံ့ဖွံ့အစိုးရကော ခံနိုင်ပါ့မလား။ မေတ္တာစေတနာ ကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေဗမာတို့ရဲ့ ကိုယ်ချင်းစာမှုကို တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်။ ပြိုင်တူတွန်းရင်ရွှေ့နိုင်တယ်လေဗျာ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ဗမာကတော့ ဗမာပါပဲ လို့ပဲမှတ်ယူရမလို ဖြစ်နေကြာင်းပါ ခင်ဗျား။
သွေးထွက် အောင် မှန်တယ် ဗျာ။ အိတ်ကြီး၊ အိတ်ငယ် ထမ်းလာပီး ရွေးဂေါက်ပွဲ နိုင်ခဲ.တဲ. ထဘီဝတ် အစိုးရ ဆီ ရောက်အောင် ဒီစာ ကိုပို.ပေး ကြပါလို.။
Nang ka ai gasi ni nau jau ai majau masing hta hkra machyi na masing myipyoi hkrat hkam sha nga n ngai. Gasi ni hpe htap htut hkra chye ka hkra nang hpe ahstam jaw ya ai GARAIWA hpe grai chyeju dum ai.Hpang de mung nau ka wa rit.GOD BLESS OUR KACHIN LAND AND OUR PEOPLE.
myen hku ka ai hpe myen ni bai n chye na taw taw re she yak ai. na htat dik ai myu ni re
Grai kaja ai, grai hkrak jaw ai laika re. English hku mung gale n na, Kachinnews, bbc, voa, cnn ni hpe sa yang grai kaja na re ngu nna, mu mada ai law. Karai Wa anhte hpe jaw ya aiatsam yawng hte, anhte ShaPawngyawng(Kachin) myu sha ni hte anhteaLamu ga hpe rau sha makawp maga bau sin nga ga law.
Hpyen kasat na matu hkyen lajang ai lam kade law tim, padang lam chyawm gaw Yehowa Karai Kasang Wa kaw na she rai nga ai.
Anhteaawng padang Yehowa Karai Kasang rai nga ai law.
Myit su wa Zau Man
Nang Ka dan ai lam ni Yawngamatu grai gaja dik sai ,Ka da ai lam ni hpe English hku mung ka shabra dat u yaw, Byin mai ai hku MYEN ni hti chye ai Website kaw lu hkra naw shakut bang u yaw
KARAI nang hpe Jinghpaw Wun Pawng sha niamatu Matut jai lang nga u ga yaw
Tang madun ai lam ni kaja ai. Matut n na grau tang du ai hku mung tang madun lu na matu naw shakut ga.